वकिलहरूलाई प्रधानमन्त्रीको प्रश्न – मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दा संविधान र कानुन उल्लेख गर्नुपर्छ भन्ने कहाँ लेखेको छ ? - samayapost.com
वकिलहरूलाई प्रधानमन्त्रीको प्रश्न – मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दा संविधान र कानुन उल्लेख गर्नुपर्छ भन्ने कहाँ लेखेको छ ?
समयपोष्ट २०७७ माघ ४ गते ८:३०
ओलीले संवैधानिक इजलास हेर्ने न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा भेटेको सूचना प्रमाणित गरेर देखाउन चुनौती दिए । ‘योभन्दा झुट, बढी ठूलो बेइमानी के हुन्छ ? न्यायप्रणालीमाथि जनताको विश्वास हटाउनका लागि, न्यायप्रणालीमाथिको यो गम्भीर प्रहार भन्दा घिनलाग्दो के हुन्छ ?’ ओलीको प्रश्न थियो ।आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ